Qalab cadceeda ku shaqeeya: waxaan si fiican u falanqeyneynaa tikniyoolajiyadan la cusboonaysiin karo | Cusbooneysiinta Cagaaran
Inuu bateriga ka idlaado mobilkaaga inta aad wadada ku jirto ama laptop-kaaga inta aad banaanka ka shaqeyneyso waa mid ka mid ah xaaladaha quusta leh ee aan cidina rabin. Waxay u badan tahay inaad maqashay ama aad isticmaashay baytariyada dibedda si aad u siiso kororka aad loogu baahan yahay ee tamarta ee qalabka elektaroonigga ahi u baahan yahay. Batariyadan dibedda ka imanaya waa inay hore u buuxsamaan oo aaney dib-u-buuxin buuxda. Sidaa darteed, maanta waxaan keenaynaa alifaad kacaan. Waxay ku saabsan tahay xeedho qoraxda.
Taasina waa in dad aad u tiro yar ay yaqaanaan waxtarka danabyadan iyo bakhaarada waxaa aad u yar helitaankiisa. Waxaan si qoto dheer u falanqeyneynaa xeedho-qorraxda si aan kuu aragno faa'iidooyinka ay ku leedahay aaladaha kale. Ma rabtaa inaad wax walba ka ogaatid xeedho qorraxda? Sii wad akhriska waadna ogaan doontaa.
2 Waa maxay xeedho qorraxda?
3 Sidee u shaqeysaa?
4 Faa'iidooyinka xeedho-qorraxda
5 Khasaaraha ugu weyn
6 Sida loo doorto xeedho-qorraxdaada
Inaad tixgelin siinin tikniyoolajiyadda casriga ah ee xeedho noocan ahi leedahay waa qalad. Isticmaalkeeda, in kasta oo ay ku egtahay meelaha qorraxdu badan tahay, waxay muhiim u noqon kartaa marka habeenkii la seexdo xero, tusaale ahaan, xilliyada fasaxa iyo gobollada kale ee ay ku badan yihiin keymaha oo ay yar tahay awoodda korontada. ilo.
Qalabka fiilada qorraxda ku shaqeeya waa wax aan ka badnayn qalabka korontada oo door muhiim ah ka ciyaara in lagu dallaco qalab kasta oo koronto. Waa lagama maarmaan in la helo koronto marka koronto la waayo ama marka qalabka korontada ku shaqeeya ee cadceedu shaqeeyaan.
Shakiga ay dadka isticmaala ka qabaan tiknoolajiyadda noocan ah waxaa ka mid ah:
Waa maxay xeedho qorraxda?
Sida loo doorto mid
Sidaa darteed, waxaan mid mid uga shaqeyn doonnaa dhammaan shakiga si loo nadiifiyo.
Xeedho ayaa gebi ahaanba ka duwan wixii aan ku baran jirnay baytariyada dibadda. In kasta oo ay u muuqan karaan inay ka tirsan yihiin isla qaybta wax soo saarka, maaddaama shaqadooda ay isku mid tahay, maahan. Qalabka tamarta qorraxda ku shaqeeya waxay ka kooban yihiin silsilado taxane ah oo qorraxda ku xiran oo isku xiraya qaab dhar iyo caag ah. Qalabkan ma uruursado tamar waxayna u baahan yihiin in lagu xiro taleefan casri ah ama xoogaa bangi awood si sax ah u shaqeeya.
Taas bedelkeeda, baytariyada dibedda waxay leeyihiin hal qorraxda oo keliya, taas oo lagu dhajiyay il awood dheeraad ah. Kuleyliyahan cadceedda ku shaqeeya waxaa si ku habboon loogu talagalay kuwa doonaya inay qoraxda u adeegsadaan isha ugu weyn ee dib-u-buuxinta. In kasta oo ay batteri la’aantu jirto, mishiinka qorraxda ku shaqeeya wuxuu leeyahay xayndaabyo fara badan oo dabooli kara aag aad u ballaadhan sidaa awgeedna iftiinka qoraxda u beddelaya koronto.
Xeedho qorraxda waxaa ku qalabaysan dareemayaal sawir-qaadeyaal kala duwan. Shaqadeeda ugu weyni waa in iftiinka loo beddelo koronto. Qalabka wax lagu rakibo waxay u egyihiin sida slate waxayna ka kooban yihiin unugyo sawir qaade ah. Waxay ka samaysan yihiin shey yar yar (inta badan silikoon). Qalabkani wuxuu gaaraa waxqabadka ugu habboon iyo waxtarka marka loo eego qalabka kale ee semiconductor.
Marka walxaha iftiinka qorraxda ay la xiriiraan silicon, tamarta ayaa la gudbiyaa. Silicon wuxuu sii daayaa elektaroonig waxa kaliya ee harayna waa in loo sii daayo iyaga si loo helo korantada Qiyaasta tamarta la soo saaray waxay u dhigantaa xaddiga iftiinka la helay. Tamarta ay bixiso xeedho-qorraxda ayaa xilligan la isticmaali karaa ama lagu kaydiyaa batteri.
Qalabka elektiroonigga ah ee noocan ah wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan. Midka koowaad ayaa ah gebi ahaanba waa mid ixtiraam u leh deegaanka, maadaama ay isticmaasho tamar dib loo cusboonaysiin karo. Waxaa jira xeedhooyinka qoraxda la qaadan karo waana la dhigi karaa meeshii aad rabto. Shuruudda keliya ee ay xeedhooyinkani leeyihiin ayaa ah inay jirto iftiin ka imanaya Qorraxda.
Waxay kuxirantahay qaabka xeedho, tamarta waa la keydin karaa waqti dheer. Qaarkood waxay awoodaan inay keydsadaan tamarta bil iyo kuwa kale ilaa sanad.
Intaas waxaa sii dheer, adeegsiga xeedho-qorraxda waxay baabi'ineysaa baahida loo qabo kharash dheeraad ah. Waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad mid iibsato oo aad hesho koronto qorraxda oo bilaash ah.
In kasta oo loo arki karo inay tahay aalad kacaan, haddana waxay kaloo leedahay xoogaa faa'iido darro ah sida dhammaan alaabooyinka. Kharashka meesha ka dhacayaa wuu ka gaabiyo kan xeedho caadiga ah. Badanaa waxay qaadataa ilaa laba jeer waqtiga. Sidoo kale waa in lagu xisaabtamo in, si loo helo lacag buuxda, xaaladaha iftiinka qorraxdu waa inay had iyo jeer noqdaan kuwa ugufiican. Hadii kale waligood dhergi maayaan.
Dhinaca kale, in kastoo awood u leh inuu soo xareeyo laptop, runtii taasi kuma haboona. Waxaa loo isticmaali karaa sidii kheyraad ku meel gaar ah. Cillada ugu weyn, sida aaladaha kale ee ku shaqeeya tamarta cadceedda, ayaa ah in xilliga qaboobaha iyo xilliyada roobka badan da’a, tiknoolajiyaddan ay noqonayso mid aan waxtar lahayn.
Goobta iyo saadaasha hawadu waxay noqdeen laba arrimood oo lagu ogaanayo waxqabadka danjireyaasha qoraxda.
Sida loo doorto xeedho-qorraxdaada
Maanta waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah xeedhooyinkaas. Sidaa darteed, doorashada waa in lagu go'aamiyaa rajooyinka aad rajaynayso inaad ku guuleysato. Markii aad dooratid mid ka mid ah xeedhooyinkaas waa sababta oo ah waxaad dooneysaa inaad haysato kordhinta heerkaaga is-maamul. Sidan oo kale, uma baahnid inaad ka walwasho batteriga moobiilka, maadaama aad ka qaadi karto.
Sidaa darteed, haddii fiilada qorraxda loo isticmaalo oo keliya in taleefan lagu soo buuxiyo Wax alaab ah lama helin.Way ka badan tahay intaas. Shuruudaha lagu xisaabtamayo ayaa ah awooda qorraxda ee xeedho iyo awooda batterigeeda. Haddii awoodda lagu muujiyo saacadaha watt ama watt iyo tan labaad ee saacadaha milla-amp. Qaar kale ayaa jira Wax alaab ah lama helin.
Waa muhiim in la hubiyo haddii danabku uu keenayo xeedhoku u fiican yahay qalabka la keenay. Danabku waa inuu ka weynaadaa ama la mid yahay kan qalabka aan dooneyno inaan soo dalacno. Haddii korantada qalabka ay ka sarreyso tan xeedho, waxaa muhiim ah in la doorto xeedho qorrax leh oo leh batteri danab sare leh. Si kale haddii loo dhigo, waxaa muhiim ah in la hubiyo iswaafajinta u dhexeeya xeedho iyo aaladaha lagu dalaco ka hor intaadan mid iibsan.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad si fiican ugu go'aansan karto haddii aad dooranaysid xeedho qorraxda safaradaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Qoraxda Photovoltaic » Qalab cadceeda ku shaqeeya
Waa maxay hal-abuurnimo weyn iyo xitaa ka sii fiican inay horeba ugu jirtay suuqyada tani waxay gacan ka geysan doontaa la dagaallanka isbeddelka cimilada tamar nadiif ah. Sida wanaagsan ee unugyadan cadceedda loo dhigi karo xafiisyadeena waxay caawin weyn u noqon doontaa meeraheenna.
Tamar aan la daweyn karin